lizohlehlela usuku olungakaziwa icala lobeyimeya yetheku - Ilanga News
Home Izindaba lizohlehlela usuku olungakaziwa icala lobeyimeya yetheku
lizohlehlela usuku olungakaziwa icala lobeyimeya yetheku
LIZOHLEHLISELWA usuku olungakaziwa icala lokukhwabanisa elibhekene nobeyimeya yeTheku, uNkk Zandile Gumede, nabanye abawu-16 obekufanele bavele namuhla enkantolo yamacala obugebengu obuhleliwe.
Ngokusho koMmeli kaNkk Gumede, uMnu Bulelani Mazondo, baziswe yinkantolo ukuthi bangezi njengoba kumiswe zonke izinto ukunqanda ukubhebhetheka kweCovid-19.
“Sitshelwe ukuthi lingase lihlale ngoNhlaba (May) uma sekudlule lezi zinsuku ezinqunywe ngumengameli wezwe zokugonqa. Sizozwa ngenkantolo usuku okuyilona lona kanti sibazisile nalabo esibamele,” kusho uMnu Mazondo.
Ngesikhathi begcina ukuvela abamangalelwa mhla ka-15 kuMa-singana (January), abameli babo bakhwela bazehlela kubashushisi ngokuthi babamba bayayeka, baphenya ungiyaphenya, kabaqedi.
IMantshi, uNkk Dawn Soomaru, yanqumela uMshushisi, u-Advocate Ashika Lekeni, ukuba namuhla ngoLwesine abuye nomkhombandlela wokuthi sebephenye bafikaphi.
Ngalo lolu suku kwashayeka phansi omunye wabamangalelwa, uNkk Sithamone Ponnam, ongummangalelwa ka-13, waze wakhishelwa emnyango kucatshangwa ukuthi uzokwelulama, kodwa wagcina ephuthunyiswe esibhedlela.
Laba abawu-16 bathweswe amacala okukhwabanisa imali yethenda lokuthuthwa kukadoti kuMasipala weTheku.
Kuthiwa kwachithwa imali engaze ifinyelele ku-R8 million ngemisebenzi abanye abangayenzanga. Umshushisi wethembise ukuthi nakhu azokwenza kuze kube namuhla:
* Umbiko wemiqingo ewu-4000 ephathelene nencithakalo mali, nayo sekukhona esiqaliwe ukuphenywa.
* Izitatimende zasemabhange eziwu-427, eziwu-130 zazo kazika-qedwa.
* Yiziliphu zokuthengiwe eziwubufakazi okumele zivezwe.
* Ukukhishwa kwezincwadi zokumele babizelwe enkantolo.
* Ukuphenywa kwezingxoxo ezaqoshwa komakhalekhukhwini nama-data.
* Uphenyo lukhulu kalulula.
UNkk Gumede nabanye aba-mangalelwa bakhala ngokuboshwa kuchaywe amagama abo emphakathini bengathweswanga amacala.
Ngenxa yaleli cala, uNkk Gumede uzithole eseshenxiswa esikhundleni sobumeya, wubuholi beqembu lakhe, i-ANC. Kwenzeka lokhu nje, kuseza ukhetho lobuholi besifunda seTheku.
Okhulumela abezokuShushiswa KwaZulu-Natal, u-Advocate Natasha Kara, uthe inkantolo izohlala namuhla bese (inkantolo) inquma usuku ezophinde ihlale ngalo.
Previous articleselubekiwe usuku olusha lwe-vdj
Next articlebakhala “ngesihluku” esibhedlela saseNkandla